'के प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा छन टोपबहादुर रायमाझी'? | The Mirror
‘के प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा छन टोपबहादुर रायमाझी’?
April 10, 2021 April 10, 2021 adminLeaveaComment on ‘के प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा छन टोपबहादुर रायमाझी’?
नेकपा (माओवादी केन्द्र) छाडेर नेकपा एमालेमा पुगेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अहिले माओबादिको कारबाहीमा परेका छन्। संसद् पदबाट निलम्वन गरेपछि रायमाझी भने प्रचण्डसँग निकै रुष्ट बनेका छन्। उनले आफूलाई कारबाही गर्न प्रचण्ड र माओवादीको कुनै पनि हैसियत र तागत नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
उनले आक्रोशित हुदै भने, ‘मलाई यो कारबाहीको औचित्य छ जस्तो लाग्दैन, मलाई कारबाही गर्न प्रचण्डले जिताएको हो र, म त दुई पार्टीको एउटै घोषणापत्र देखाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ’। त्यसकारण माओवादी र प्रचण्डको मलाई कारबाही गर्ने हैसियत कहाबाट आयो? त्यसैले प्रचण्डको यो निर्णयविरुद्ध कानुनी रूपमा लड्न तयारी गरिरहेको छु’।
प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने यो निर्णयले देखाएको उनको भनाइ छ। प्रचण्ड सधै सत्ता र कुर्सिको भोको भएको पनि दाबी गरे।
Please, Watch This Video Too…
A New Way Of Corruption…
Tagged prachandatop bahadur rayamajhi
‘किन म्यान्मारको सेनाले १९ जनालाई मृत्युदण्ड दियो’?
‘एक वर्षमा कोरोना महामारीको बारेमा सिकेका ९ मुख्य कुराहरु’
अमेरिकामा प्रहरीको गोलीबाट एक अश्वेत युवकको ज्यान गयो
एमालेमा कुरा मिल्यो, ओली जेठ २ मा फर्किन सहमत
May 15, 2021 June 10, 2021 admin